ဘာကြောင့် Hostel မှာတည်းသင့်လဲ???? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Travel » ဘာကြောင့် Hostel မှာတည်းသင့်လဲ????
ဘာကြောင့် Hostel မှာတည်းသင့်လဲ????
Posted by Shar Thet Man on Oct 9, 2017 in Travel | 11 comments
ခရီးတစ်ခုသွားမယ်ဆိုရင် အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းလေယာဉ်လက်မှတ်က ဈေးအကြီးဆုံးပါ ပြီးရင်တော့အများအားဖြင့် တည်းခိုစရိတ်တွေကဈေးကြီးတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တွေလိုလူငယ်တွေ ပိုက်ဆံလည်းအများကြီးမသုံးနိုင်ဘူး ကြာကြာလည်းနေချင်တယ် ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် တည်းခိုစရိတ်တွေမှာချွေတာလို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်။
အဲ့ဒါကတော့ Hostel/Dorm တွေမှာနေတာပါ။ နောက်ပြီး တစ်ယောက်တည်းခရီးသွားရလို့ ဟိုတယ်ခန်းမှာ တစ်ယောက်တည်းမနေရဲတဲ့ ကိုယ်လိုလူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတာပေါ့
အဲ့တော့ Hostel တွေမှာနေရခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးတွေ၊ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေကို သိသလောက် sharing လုပ်ပေးပါမယ်နော်။
ဟုတ်ပါတယ် စောစောကပြောခဲ့သလိုပဲ ငွေကုန်သက်သာပါတယ်။ နေရာတော်တော်များများမှာ Hostelအများစုက တစ်ညကိုတည်းခိုစရိတ် ၁၀ဒေါ်လာမကျော်ပါဘူး တစ်ချို့တွေဆိုမနက်စာတောင်ပါသေးတယ်။၃စတားဟိုတယ်မှာတည်းတာရဲ့တစ်ဝက်လောက်သက်သာတာကြောင့် ရက်အကြာကြီးနေမဲ့သူတွေအတွက့်ကုန်ကြစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်မှာပါ။နောက်ပြီး hostel မှာလာတည်းတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးကခရီးသွားတွေနဲ့လည်းမိတ်တွေဖွဲ့နိုင်ပါသေးတယ်။ တစ်ယောက်တည်းသွားလည်း သူငယ်ချင်းရသွားမှာမို့လို့မပူနဲ့နော်
locker တွေလည်း hostel တော်တော်များများမှာရှိတဲ့အတွက် အပြင်သွားရင်သယ်မသွားချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်း locker ထဲသော့ခတ်ပြီးထည့်သွားရုံပါပဲ တစ်ချို့ hostel တွေမှာတော့ luggage size အကြီးတွေထည့်လို့ရတဲ့ locker တွေရှိပေမယ့် တစ်ချို့မှာမရှိပါဘူး ဒါပေမယ့် မပူပါနဲ့ luggage တွေ backpack တွေအတွက် သီးသန့်ထားရမယ့်နေရာတွေထားပေးတတ်ကြပါတယ်။ ရေချိုးခန်း အိမ်သာတွေကတော့ share ပြီးသုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက် အခန်းမအားရင်ခဏစောင့်ရတာလေးတွေတော့ရှိတတ်ပါတယ်။ အများစုကတော့ရေချိုးခန်းအိမ်သာလုံလုံလောက်လောက်ထားပေးတတ်ကြလို့ no worries ပါ ပြီးတော့ သူများနဲ့နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက် သူများတွေကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမဲ့အပြုအမူမျိုးလေးတွေ ဥပမာ သူများတွေအိပ်နေချိ်န်စကားအကျယ်ကြီးပြောတာတိ၊ု့ မုန့်တွေစားစရာတွေအခန်းထဲယူစားတာတို့ ကိုတော့ရှောင်ရပါမယ်ရှင့်။
Bangkok, Phuket နဲ့ Vietnam က location အရရော တစ်ခြား facilities တွေပါကောင်းတဲ့ hostel လေးတွေလည်းသိချင်ရင်လည်း မွန်လေးကို
အဲ့ဒီလင့်ခ်ထဲက ဇာတ်ကားထဲကလိုမျိုး Hostel တွေမှာသာ တည်းမိမှာတော့ ကြောက်တယ်ကွယ်
ပထမအကြိမ် Hostelမှာတည်းတာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဈေးလည်းသက်သာတယ် နိုင်ငံအသီးသီးကလူတွေလည်းတွေ့တာနဲ့တမ်းနှုတ်ဆက်တယ် ဟိုတယ်မှာလိုအဆင့်မြင့်မြင့်မဟုတ်ပေမဲ့ လူငယ်တွေဆိုရင်တော့ hostel မှာနေသင့်တယ် အတွေ့အကြုံလည်းရတယ် ပိုက်ဆံလည်းသက်သာတယ်
တချို့ကျပြန်တော့ Hostel ဆိုရင် အမြင်နည်းနည်းများ မြင်နေသလားလို့လေ…
ဘယ်လိုမြင်မလဲတော့မသိဘူး ရုံးက ကကြီးဆရာပြောတာတော့အနောက်တိုင်းကhostelကတစ်မျိုးပဲလို့တော့ပြောတယ် ခုသွားခဲ့တဲ့နေရာကတော့မဆိုးပါဘူး အရှေ့တိုင်းမိုလို့လားတော့မသိဘူး အဆင်ပြေတယ်
A mar nyo >> ဟုတ်ပါတယ်…တော်တော်လေးသက်သာပြီး ကိုယ်လိုစကားအိုးဆိုတော့ပိုပြီးမိတ်ဆွေရပါတယ်
ko six >> တည်းကြည့်ပါ
manawphyulay >> ဖန်ခွက်ထဲမှာ ရေရှိနေသလိုမျိုးပေါ့..တချို့ကတ၀က်တောင်ရှိသေးပါလား..တချို့ တ၀က်ပဲရှိတော့ပါလားပေါ့
. တချို့အိမ်တွေက… အခန်းပို..အခန်းလွတ်တွေရှိတယ်..။ တချို့ကအိမ်တလုံးလုံးကို.. လွတ်နေတတ်တယ်ပေါ့..။
ဆိုတော့.. မြို့ရွာနယ်ဒေသတခုကို အလယ်လာသူတွေက.. ဟော်တယ်ရှိရင်ဟော်တယ်..။ မော်တယ်.. ဟော်စတယ်.. စသဖြင့်.. ငွေပေး.. ရှာတည်းကြရတာပါပဲ..။
အဲလို.. လွတ်နေတဲ့အခန်း.. အိမ်ကိုဝင်တည်းနိူင်ရင်.. အဆင်မပြေလား..။
ဒါကို.. အကျိုးရှိစွာ အသုံးချရင်း.. ပိုက်ပိုက်လဲရ.. တည်းသူလည်းအဆင်ပြေအောင်.. ဆားဗစ်(၀က်ဘ်ဆိုက်) ရှိပါတယ်..။
မြန်မာပြည်အတွက်မယ်.. အဲဒီဝက်ဘ်ဆိုက်က.. အလုပ်လုပ်ပါတယ်..။
ဆိုတော့.. တောရွာတွေအထိ.. မရှိသေးရင်လည်း.. မြန်မာတွေထဲက.. အဲလိုလုပ်နိုင်ကြရင်ဖြင့်.. ဒေါ်လာလေးများရမယ်ဖြစ်လို့.. လိုချင်ကြမှာဖြစ်ကြောင်း..။
Rent Out Your Room, House or Apartment on Airbnb (2017)
Earn money as an Airbnb host. … Sign up to become an Airbnb host. … Host controls and calendar settings can help make hosting easier.
A mar nyo says : ” အနောက်တိုင်းက hostel က တစ်မျိုးပဲ ”
ကိုယ်တွေက ကမ္ဘာပါတ်နေသူ Hotel မျိုးစုံ တည်းဘူးသူ ဆိုပေမယ့် ၊
Back Packer Hostel တွေကိုတော့ မတည်းဖူးဘူးကွယ် ။
အနောက်တိုင်းက hostel က တစ်မျိုးပဲ ဆိုတာကို သိချင်မိသား ။